म अहिले “प्रियतमा” भन्ने मेरो सोलो एल्बमको काममा व्यास्त छु : गायक टीबी राई
गायक टीबी राई बैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा साउदी अरबमा रहेर पनि नेपाली गीत-संगीतको दुनियाँबाट अलग रहन सकेका छैनन् । उनको गीत-संगीत प्रतिको मोहले गर्दा भर्खरै “म तिमीलाई माया गर्छु” बोलको गीत सार्वजानिक गरेका छन् । यहि सेरोफेरोमा रहेर नव गायक टीबी राई संग गरिएको कुराकानीको सम्पादित भाग
यहाँ लाई सुचना खबरमा स्वागत छ
धन्यवाद ईन्द्र सर अनि सुचना खबर् डट् कमलाई
अहिले केमा व्यास्त हुनुहुन्छ?
म अहिले “प्रियतमा” भन्ने मेरो सोलो एल्बमको काममा व्यास्त छु भर्खरै मेरो एल्बमको एउटा गीत म्युजिक नेपालबाट सार्वजनिक भएको छ। म “तिमीलाई माया गर्छु” भन्ने यस्मा मेरो आफ्नै शब्द संगीत गायन रहेको छ।यो मेरो एल्बमको कामको लागि आदरणीय संगीतकार तथा गायक सुमन राई सरले धेरै सहयोग गर्नु भएकोछ। उहालाई धन्यवाद भन्न चहन्छु।
प्रियतमा एल्बममा कस्ता-कस्ता गीतहरु सुन्न र हेर्न सकिन्छ?
यस्मा सबै बेसका गीतहरु सुन्न र हेर्न सक्नु हुन्छ। बिशेष गरेर म पप बेसको गायक भएकोले बढि जसो पप बेसका गीतहरु सुन्न सक्नु हुने छ। केही गीतहरु अधुनिक बेसका पनि सुन्न सक्नु हुने छ ।
यो तपाईंको एल्बम कहिले सम्ममा बजारमा आउछ होला?
यो एल्बम १ बर्ष भित्रमा
तपाईं अहिले बिदेशमा हुनुहुन्छ?
हजुर म बिदेशमा छु। तर बिदेशमा भएर पनि गीत संगीतलाई माया गर्छु
कुन देशमा हुनुहुन्छ?
म साउदी अरबमा
बिदेशमा रहेर कसरी समयलाई ब्याबस्थापन गर्नु हुन्छ?
ड्युटी पछीको समयलाई
तपाईं यो छेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको कती भयो?
म लागेको त ८-१० बर्ष भयो तर बिचमा म पारिवारिक समस्याले गर्दा बिदेशिनु पर्यो त्यसैले म पछी परे। ढिलाई भए पनि आउन सफल भएको छु। स्रोता र दर्शकहरुको मायाको आशा लिएको छु।
औपचारिक संगीतको को संग सिक्नु भयो?
मैले आजभन्दा १० बर्ष अगाडि आदर्णीय गुरु डक्टर किरात ज्यु सँग सिकेको थिए।
तपाईंले संगीत पनि गर्नु हुन्छ रचना पनि गर्नु हुन्छ गाउनु पनि हुन्छ यस्मा कुन चाँही सजिलो जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
हजुर म लेख्छु पनि संगीत पनि गर्छु अनी गाउछु पनि तर सबै गाह्रो कुरा नै हो तर अलिक गाउन सजिलो लाग्छ मलाइ
तपाइको परिवार बाट कतिको सपोर्ट छ यो संगीत छेत्रमा?
भरपुर् गर्नु हुन्छ। परिवारको सबै भन्दा सपोट र आशिर्वाद नै ठुलो कुरा हो उहाहरुले आशिर्वाद दिनु भएको छ।
अन्तमा याहाको एल्बमले सफलता पाओस शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा मैले सोध्न छुटाएका केहि छ?
यहाँ सम्म मलाइ बोलाएर मेरो एल्बमको बारेमा बोल्ने अवसर दिनु भएकोमा सुचना खबरलाई मुरि-मुरि धन्यवाद अनी मेरो एल्बमको एउटा गीत यहाँहरुको सामु लिएर आएको छु। म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने गीत सुनेर हेरेर सल्लाह सुझाब दिनु होला माया गरी दिनु होला ।
दिपा तामाङ्ग र सुमन राईको पूर्वेली लोक जुवाडि रेकर्डिङ्ग समपन्न